Obama sy India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2018 4:35 GMT
Ny fifidianana an'i Barack Obama no zava-nitranga be mpijery indrindra tany India. Toa i Obama no safidy ho Filoha ho an'ny bilaogera maro any India. Ity misy sombiny vetivety momba ireo fanehoan-kevitra voalohany avy amin'ireo bilaogera any India momba ny dika ara-tantara tamin'ny fifidianana an'i Obama. Mahaliana fa ny lohahevitra fototra tamin'ny lahatsoratra bilaogy sasany dia momba ny fomba sy ny fotoana hipoiran'izay mitovy amin'i Obama ao India? Tsy ao Amerika ihany no ilaina ny fanovana, fa koa any India araka ny hafatra avy amin'ireo bilaogera.
Kakisi's World mampiseho ny fihetseham-po sy ny fomba namoronana ny tantara mikasika ny fifidianana an'i Obama ho filoha faha-44 ao Etazonia. Manoratra ilay bilaogera fa mila an'i Obama i India:
Randeep Ramesh avy amin'ny ‘Asian Musings’ manoratra momba ny ‘‘Nasionalista Obama‘ ao India, hoy izy:
Notohizan'i Randeep tamin'ny fanehoan-kevitra mitantara sy mampitaha ny demokrasia eo amin'i India sy Etazonia. Manamafy ny zava-misy izy fa tsy mitovy amin'ny endrika Indiana ny endrika demokrasia Amerikana. Hoy koa izy:
Rashmi Bansal ao amin'ny Youth Curry mamoaka lahatsoratra mahaliana momba ny dikan'ny fandresen'i Obama ary manontany tena hoe rahoviana i India vao hahazo ny Obama_ny:
Ao India i Appopt ao amin'ny Daily Kos ary mizara ny eritreriny momba ny tazo Obama ao India sy ny faniriany hiverina any Etazonia ho an'ny fifidianana ihany:
Nikarakara fihaonana sakafo maraina (noho ny fahasamihafan'ny ora misy eo amin'i India sy Etazonia) mba hijery ny valim-pifidianana ny Democrats Abroad ahitana ireo mpila ravinahitra Amerikana ao Bangalore. Robin King ao amin'ny Bits From Bangalore mizara sary sasantsasany ary manoratra hoe: